Kobaca dhaqaale ee ugu kobcaya ee sannadka 2021. Sarriyadaha dijitalka ah oo leh awoodda ugu badan ee faa'iido leh, korodhka ugu sarreeya.
Ugu sareeya 10 suuqyada ugu kobcaya ee kobaca dhaqaalaha ee kor u kaca qiimaha ugu sarreeya usbuucii hore.
Lacago fara badan oo leh awoodda ugu badan
Kobaca boqolkiiba hal asbuuc
Enjin Coin (ENJ) 124.96 %
Chiliz (CHZ) 78.80 %
Flow (Dapper labs) (FLOWDAPPERLABS) 67.67 %
Power Ledger (POWR) 52.31 %
TrustSwap (SWAP) 50.16 %
Theta Fuel (TFUEL) 50.14 %
NEM (XEM) 46.66 %
Basic Attention Token (BAT) 45.30 %
Decentraland (MANA) 41.89 %
Celer Network (CELR) 40.41 %
Sida ugu dhakhsaha badan ee loo kobcinyo lacagta digital waa adeegga websaydhka 'cryptoratesxe.com', kaas oo muujinaya lacagaha ugu sarreeya ee loo yaqaan 'aaladaha lacagta' oo leh kororka ugu dhakhsaha badan usbuucii la soo dhaafay.
Adeegga khadka tooska ah ee "koritaanka deg deg ah ee lacagta digital" wuxuu adeegsadaa ilo furan oo laga heli karo isweydaarsiga lacagta digital wuxuuna abuuraa qiimeyn xagga sare u kaca ah ee aaladaha lacagta waqtiga dhabta ah.
Xawaareynta dhakhsaha badan ee loo yaqaan 'lacagta digital' waa crypto, marka loo eego qeexitaannadayada, taas oo inta lagu jiro usbuuca lagu muujinayo kororka ugu badan ee faa'iidada, koritaanka qiyaasta. Isbeddelka ku yimid qiimaha lama tixgelinayo annaga annaga tixgelin ma lihi, kaliya isbeddelka qiimaha ee muddada toddobaadlaha ah ayaa la tixgeliyaa. Noocan oo kale ah lacagta digital, sida caadiga ah, waxay muujineysaa faa'iidada ugu sarreysa, laakiin had iyo jeer ma xasillooni. Khataraha maalgashiga lacagta dhakhsaha u kordheysa ayaa ugu badan, laakiin ugu badnaan soo laabashada waqti kasta.
Dhaqdhaqaaqa dhakhsaha badan ee lacagta digital ayaa ku habboon maalgashiga gaagaaban, ee aan xasilloonayn.
Si ka duwan ah "" adeeg, kaasoo muujinaya heerka ugu sareeya ee kobaca toddobaad gudihiis, Lacagta ugu sarreysa ee koraya adeeg,, liddi ku ah, waxay ku soo bandhigeysaa crypto oo leh koror yar oo la hubo iyo kalsooni yar.
Qiimaynta sida ugu dhaqsaha badan ee aaladaha lacagta ayaa had iyo jeer looga sheekeyaa khadka tooska ah, maaddaama isweydaarsiga lacagta digital si joogto ah looga ganacsado, heerka sarrifka lacagta digital ayaa si joogto ah isu beddelaya.
Adeegso adeegga "dhakhso u koraya crypto" khadka tooska ah oo bilaash ah.
Macaashka ugu badan ee loo yaqaan 'lacagta digital' 2021 waa adeega bogga internetka ee bilaashka ah kaasoo soo bandhigaya faa'iidada ugu badan, aragtideena, aaladaha lacagta oo aad dhaqso ugu kasban karto.
Waxaan qiimeyneynaa faa'iidada ka timaadda aaladaha lacagta annaga oo beddeleyna qiimaha lacagta ama sarrifka lacagaha isweydaarsiga. Waxaan u aragnaa lacagta ugu faa iidada badan ee loo yaqaan 'crypto crypto' inay tahay tan muujisay isbedelka ugu sarreeya ee togan ee qiimaheeda muddada toddobaadlaha ah. Annaga oo tixgelin siinaynna xasilloonida cabbirkeeda, waxaan eegnaa oo keliya farqiga u dhexeeya qiimaha bilowga waqtiga iyo dhammaadka waqtiga.
Tusaalaha ah farqiga u dhexeeya sicirka macaashka loo yaqaan 'crypto macaash faa'ido' wuxuu ka baxaa 7-dii maalmood ee lasoo dhaafay. Qiimaha iyo dhaqdhaqaaqa isbedelka sarrifka lacagta digital ayaa isbedelaya maalin kasta iyo saacad kasta. Qiimeyntayada ugu sareysa "qiimeynta ugu faa'iidada badan ee lacagta digital" ayaa sidoo kale isbeddelaya.
Aaladaha lacagta ee ugu dhaqsiyaha badan ee 2021.
Aaladaha lacagta ugu dhakhsaha badan ee kobaca ee loogu talagalay 2021 - waxaan ku soo bandhigaynaa boggan. Laakiin dhakhso-u kora waa erey macnaheedu yahay soon. Qiyaasta sicirka sarrifka 'crypto' ee 2021 waa mid kudhawaad ​​dheer. Ku adeegso sida ugu dhaqsaha badan ee aaladaha lacagta loogu talagalay 2021 waxay muujineysaa lacagaha leh qiyaasta koritaanka usbuuca.
Liistada dhaqso u koraya ee aaladaha lacagta for 2021 waxaa matalaya tusaalaha 10 cryptos oo kala soocaya kala-sooca ugu dhakhsaha badan uguna dhakhso u koraya, ee hoos udhaca qaab soosaarka.
Koritaanka degdega ah waxaa lagu gartaa kaladuwanaanshaha dabcan bilowga waqtiga daraasadda iyo dhamaadka. Maxay yihiin soo-noqnoqda iyo meelaha ugu sarreeya ee ah isbeddelada sicirka sarrifka 'crypto' ee waddadan ma ahan muhiim.
Waxaan tusinaa macluumaad ku saabsan isbeddelada ku yimaada soosaarka lacagaha ugu dhaqsaha badan sida boqolkiiba inta heerka kobaca.
Darajaynta ugu dhaqsaha badan ee aaladaha lacagta ayaa la soo bandhigay usbuucii ugu dambeeyay ee 2021. Kama raadinayno awoodaha lacageed ee adeeggan.
U adeegso adeegga sare ee sida dhaqsaha badan u kobcaya ee aaladaha lacagta for 2021 khadka tooska ah iyo bilaash.
Kuwa ugu faa'iidada badan aaladaha lacagta.
Kuwa ugu macaashka badan ee loo yaqaan 'aaladaha lacagta' waa mid ka mid ah walxaha maalgashiga ugu dhakhsaha badan muddo gaaban.
Faa'iidada ugu badan ee lacagta digital waxay u oggolaaneysaa maalgashadayaasha soo jiidashada leh inay kasbadaan lacag badan muddadan ugu yar.
Dabcan, khataraha ka imanaya dakhliga ugu sarreeya sidoo kale waa ugu badan yihiin.
Maalgashiga crypto macaashka ugu badan waa in lagu sameeyaa iyada oo diyaar u ah in si joogto ah loola socdo sicirka isla markaana aan lagu dhaafin barta laga baxo maalgashiga.
Shuruucda ka ganacsiga isdhaafsiga crypto, iyo sidoo kale isweydaarsiga caadiga, waa kuwo la fahmi karo, oo haddii lacagta digital uu dhakhso u helayo qiimo isla markaana uu muujiyo dakhli wanaagsan, markaa sidoo kale si dhakhso leh ayuu u lumiyaa qiimaha.
Waa lacagta digital this aan ku tuso adeeggan bartayada.
Aaladaha lacagta oo leh koritaanka ugu badan.
Aaladaha lacagta oo leh koritaanka ugu badan - waxaa la go'aamiyaa waqti qaar ka mid ah. Adeeggeena isugeynta qiimeynta 'lacagta digital' ee khadka tooska ah ee koritaanka, waxaan dooranay qiimeyn hal toddobaad ah.
Kororka ugu badan ee crypto usbuucii, sida aan u aragno, waxay muujineysaa isbeddelka heerka sarrifka lacagta digital iyo sidoo kale suurtogal. Waqtigan xaadirka ah, dhammaan dhaqdhaqaaqyada yar yar waa la dejinayaa oo isbeddelada maalinlaha ah ee heerka sarrifka ayaa sidoo kale ficil ahaan looma tixgaliyaa.
Kororka ugu badan ee crypto ee adeeggayagu waa tilmaame celcelis inta u dhaxaysa maalgashiga muddada dheer iyo dillaaliyeyaasha maalinlaha ah ee ciyaarta isweydaarsada.
Crypto oo leh heerka koritaanka ugu badan ayaa sidoo kale lagu arki karaa adeegyada kale ee boggayaga.
Jadwalka faa iidada ugu dhaqsaha badan uguna dhaqsaha badan uguna koraya.
Shaxda kuwa faa'iidada ugu dhaqsaha badan uguna dhaqsaha badan u kobcaya ee aaladaha lacagta - muuqaal ahaan u soo bandhigaya darajigeenna ugu sarreeya ee ugu faa'iidada badan crypto.
Miiska shaashadda ugu dhaqsaha badan ee crypto-ka waxaad ku arki doontaa magaca lacagta loo yaqaan 'crypto currency' iyo isbeddelka sicirkiisa boqolkiiba.
Markaad gujiso mid ka mid ah faa'iidooyinka aaladaha lacagta ee miiska, waxaa laguu wareejin doonaa bogga si aad u hesho macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan heerka sarrifka lacagaha.
Shaxda ah faa'iidada ugu dhaqsaha badan uguna dhaqsaha badan ugudambaysa.
Shaxanka faa'iidada ugu dhaqsaha badan uguna dhakhsaha badan ee koritaanka aaladaha lacagta waa qalab kale oo bilaash ah oo internetka ah kaasoo soo bandhigaya darajada ugu sarreysa ee aaladaha lacagta ugu macaashka badan.
Jaantusyada lacagaha ugu dhaqsaha badan ee loo yaqaan 'aaladaha lacagta' waxay muujinayaan firfircoonaanta heerka 10-ka sare ee cryptos oo leh maalgashiga ugu sareeya marka loo eego qiyaasahayada.